NY LALAN’NY HAZOFIJALIANA SY NY NIANTOMBOHANY – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Eo koa ny lalan’ny hazo fijaliana. Iny moa dia hita ao amin’ny Evanjely efatra mihitsy ary tsy zava-baovao amintsika angamba ny nanjo an’i Jesoa. Ka ny tantarany izay nahatonga antsika hoe manao azy io no tsindriana kely fotsiny.
– Nanomboka tamin’ny andron’ny Constantin (313) rehefa tsy nisy intsony ny fanenjehana ny Kristianina dia maro ireo Kristianina nanakany Jerosalema amin’ilay herinandro masina iny te-hamerina ny lalana nodiavin’i Jesoa nialoha ny nahafatesany. i.e te hiaina indray izay niainan’i Tompo tamin’io fotoana io ary te-handray anjara amin’ny fijaliana niaretany. Izany fihetsika izany moa dia nataony mba hanehoana fisaorana ilay namonjy azy ireo dia i Jesoa Kristy izany.
– Tamin’ny taon-jato 14 sy 15 ny franciscains dia nampiparitaka ny “dévotion” amin’ny lalan’ny hazo fijaliana.
– Tamin’ny andron’i Pape Clément 12 (1730-1740) sy Benoît 14 (1740-1758) no niferana ho 14 ny fijanonana atao amin’ny lalan’ny hazo fijaliana.
– Ary hatramin’ny 1958 dia natao 15 ny fijanona tao Lourdes.
Ho antsika izany ny fanaovana ny lalan’ny hazofijaliana sy ny fanarahana ireo fijanonana ireo dia sahala amin’ny hoe miaina indray izay nodiavin’ny Tompo satria moa tsy ary ho tonga any Jerosalema daholo isika ka hoe andeha hanaraka izay lalana nolalovan’i Jesoa tamin’ny andro sy ora nijaliany.